တစ်ဦးပျက်စီး HARD DRIVE ကိုအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ဆွဲထုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို - HARD DISK ကို - 2019
တစ်ဦးပျက်စီး hard drive ကိုမှဖိုင်များကိုရရှိရန်မည်သို့
အများစုမှာအသုံးပြုသူများကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖို့ကိုလိုလားကြပါတယ်။ နှင့်ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်, သင့်ကွန်ပျူတာအများအပြား features တွေနှင့်အတူအထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုကစားသမားများနှင့်ထောက်ခံကို formats ၏ကြီးမားသောစာရင်းတပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဆော့ဖျဝဲ Crystal Player ကို - ယနေ့အသံနှင့်ဗီဒီယို၏ပြန်ကျော့စိတ်ဝင်စားစရာ tool ကိုရှိရလိမ့်မည်။
crystal Player ကိုဥပမာ - အဘို့, ဝါကြွားခြင်းမနိုင်တော်မူသောရန်ထောက်ခံကို formats တစ်ခုကျယ်ပြန့်စာရင်းထဲမှာဝါကြွားသောကစားသမား, Windows Media Player အတွက်စံအဖြစ်ဗီဒီယိုအဆင်ပြေကြည့်ရှုပေးအဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များ။
ကို formats ၏ကြီးမားသောစာရင်းထောက်ခံပါသည်
crystal Player ကိုအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံအသံနှင့်ဗီဒီယိုကို formats ၏ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာကို format နဲ့သင်တစ်ဦးရှားပါးတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေအားဖြင့်ငါတို့သည်ကြောင့်အစီအစဉ်ကိုဖွင့်လှစ်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုပြောနိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယိုကို Setup ကို
ဗီဒီယိုထဲမှာပုံရိပ်၏မူလအရည်အသွေးကိုကျွန်တော်ချင်ပါတယ်ကဲ့သို့တူညီသောမဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အရောင်ဆန့်ကျင်ဘက်အခြား parameters များကိုရွှဲအသုံးပြုခြင်း, သင်အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံ့ထိုကဲ့သို့သောရလဒ်ရရှိ, အရောင်ဆုံးမခြင်းစေနိုင်သည်။
၏သင်တန်း, program developer များအသံ configure လုပ်ဖို့ tools တွေကိုလျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူး။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုဒဏ်ငွေ-ညှိသင့်ရဲ့အရသာကိုက်ညီဖို့အသံအရည်အသွေးခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာ 10-တီးဝိုင်း Equal, နေဖြင့်ပေးအပ်သည်။ ကံမကောင်းစွာက program ကို BSPlayer အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ကဲ့သို့သောပုပြီးသား-configured ရွေးချယ်စရာအသံက Equal,, ပျက်ကွက်ဖြစ်ကြသည်။
ကို default ကဗီဒီယိုစာတန်းထိုးတပ်ဆင်ထားမထားဘူးဆိုရင်, သင်သီးခြားစီသူတို့ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး program ကိုရန်ဆန္ဒရှိရုပ်ရှင်မှစာတန်းထိုးနဲ့အထူးဖိုင်ကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏ video မျိုးစုံအသံပုဒ်ရှိပါတယ် အကယ်. ဥပမာ, program ကို Crystal Player ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားဘာသာပြန်ချက် options များနှင့်အတူသင်သည်သူတို့၏နှစ်ခုဥပဒေကြမ်းများကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်။
crystal Play အစီအစဉ်ကိုသင်ယခုအချိန်တွင်ကစားခံရဖိုင်ကိုအကြောင်းကိုပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ခွင့်ပြု: က၎င်း၏အရွယ်အစားဖြစ်ပြီး, ပုံစံနှင့် frame rate နှင့် resolution နဲ့ပိုပြီး။
ဗီဒီယိုကို filter များ
သင်ဗီဒီယို built-in filter များသုံးပြီးအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးမဟုတ်ကစားရန်လိုအပ်လျှင်, သင်အတန်ငယ်အခြေအနေကတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။
playlists, အရှင်သင်ကြည့်ရှုသည့်သို့မဟုတ်နားထောင်ရန်ချင်သောတိကျတဲ့နိုင်ရန်အတွက်ဖိုင်တွေအားလုံးကိုဖြည့်စွက်, သင်သီချင်းစာရင်းဖန်တီးကြကုန်အံ့။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို Crystal Player ကိုသင်ဖွင့်စာရင်းများကိုတစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်ကဖန်တီးပြီးတော့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကသူတို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
နောက်ကျောကဗီဒီယိုထဲမှာအလိုရှိသောအချိန်ကြားကာလကိုသွားသည့်အချိန်တွင်မဆို, ကအထူး bookmark ကိုဖနျတီးဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
Computer ကို - သင်တစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုအလုပ်လုပ်တဲ့ device ကို။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ပျော်မွေ့တွေနဲ့စီးပွားရေးပေါင်းစပ်မဟုတ်လော built-in tools များနှင့်အတူ, သင်ကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်ဆက်သွားဖို့အားလုံးပြတင်းပေါက်၏ထိပ်ပေါ်မှာ program ကိုပြတင်းပေါက် fix နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ interface ကိုလူတိုင်းအဘို့ရှင်းလင်းစွာမဟုတျပါဘူး, ဒါကြောင့်အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းပေးအပ်ရှိသည်။ သို့သော်ဥပမာ, ပြီးသား built-in သည့်အရေခွံ BSPlayer အစီအစဉ်ကနေ, မတူပဲ Crystal ကစားသမားအတွက်သူတို့လုံးဝပျောက်ဆုံးနှင့်သီးခြားစီဒေါင်းလုတ်ရန်ရှိတယ်နေကြသည်။
လှုပ်ရှားမှု၏နှစ်မိနစ်အကြာတွင်ကွန်ပျူတာကို turn off တံ့သောအစီအစဉ်၏တစ်ဦးအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်။ အလိုအလျောက်စနစ်ပိတ်ပစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်ကြာမြင့်စွာကစားစာရင်းအစီအစဉ်ကစားခဲ့သည်။
Crystal Player ကို၏အားသာချက်များ:
1. အမြင့် functionality နဲ့ထောက်ခံကို formats ၏ကြီးမားသောထား;
အားနည်းချက်များ Crystal ကစားသမား:
1. ပေါရာဏဒီဇိုင်းနှင့်မဟုတ်ဘဲအဆင်မပြေ interface ကို;
2. အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပေးဆောင်, ဒါပေမယ့်စမ်းဗားရှင်းရှိ၏။
crystal Player ကိုအများအပြား features တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ကစကားမစပ်, ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့အရေခွံကိုအသုံးပြုပြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့်, အင်တာဖေ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် - ဤကစားသမားရှုံးသောတစ်ခုတည်းသောအရာ။
Crystal Player ကိုအစမ်းဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
Windows Media Player crystal တီဗီ MKV Player ကို Media Player ကိုဂန္ထဝင်မူလစာမျက်နှာရုပ်ရှင်ရုံ (MPC က-HC)
crystal Player ကို - အနိမ့်မှုစနစ်လိုအပ်ချက်များကိုတွန်းနှင့်သင်ပြင်ပဖိုင်များကိုချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အင်အားကြီး video player ကို။
System ကို: Windows XP ကို, vista,
ရေးသားသူ: Kim ကအေ Bondarenko
ကုန်ကျစရိတ်: $ 30 ကို
Size ကို:4MB အထိ